Fihaonambe 14as International gvSIG: «toekarena sy vokatra»
Ny Sekoly Teknika Higher of Geodetic, Cartographic and Topographic Engineering (Polytechnic University of Valencia, Spain) dia hampiantrano, mandritra ny taona iray hafa, ny Konferansa Iraisam-pirenena gvSIG , izay hatao ny 24 ka hatramin'ny 26 Oktobra eo ambanin'ny teny filamatra "Economy and Productivity" . Mandritra ny fihaonambe dia hisy ny foto-kevitra samihafa amin'ny famelabelarana (fitantanana kaomina, vonjy taitra, fambolena ...), ary hisy ...
Fampaherezana sarobidy ho an'ny gvSIG - The Europa Challenge Award
Mahafinaritra ny mahafantatra fa nahazo loka iraisam-pirenena ny gvSIG nandritra ny Fanamby eropeana farany teo. Ity loka ity dia manome ny vahana tetikasa mitondra fanavaozana sy vahaolana maharitra ho an'ny fiarahamonina manerantany. Mazava ho azy, raha manampy lanja fanampiny amin'ny INSPIRE Initiative izy ireo ary mampiasa ny haitao azo alaina avy ...
New-tserasera antokony gvSIG
Izahay dia manambara ny fanombohan'ny fizotran'ny fisoratana anarana ho an'ny gvSIG-Training Distance Courses, miaraka amin'ny fanapahana faharoa an'ny 2014, izay ampahany amin'ny tolotra fanamarinana ny Fikambanana gvSIG. Amin'ny vanim-potoana fahafolo taonan'ny tetikasa gvSIG, maro amin'ireo taranja no mihena, ary misy koa Mazava ho azy fa ...
Inona no dikan'ilay kinova gvSIG 2.0 vaovao
Amin'ny fanantenana lehibe no anambaranay ny zavatra nampitain'ny Association gvSIG: kinova farany an'ny gvSIG 2.0; tetikasa izay niasa tamin'ny fomba somary nifanitsy tamin'ny fivoaran'ny 1x ary mandraka ankehitriny dia namela anay afa-po tamin'ny 1.12. Anisan'ireo zava-baovao, manana maritrano fampandrosoana vaovao ity kinova ity, ao ...
Desktop SuperGIS, fampitahana sasany ...
SuperGIS dia ao anatin'ny maodely Supergeo noresahiko andro vitsivitsy lasa izay, miaraka amin'ny fahombiazana tsara any amin'ny kaontinanta Azia. Aorian'ny fitsapana azy dia ireto misy ny fiatraikany izay noraisiko. Amin'ny ankapobeny dia izay ataon'ny programa mpifaninana hafa rehetra no ataony. Amin'ny Windows ihany no azo andehanana, angamba amin'ny C ++ no amboarina, ho an'ny ...
ESRI gvSIG OS KML samy hafa GIS shp
jeospatial - GIS, GvSIG, SuperGIS
Portable GIS 3 version, saiky avy amin'ny USB
Ny kinova fahatelo an'ny Portable GIS dia nambara, fitaovana iray izay nojerentsika telo taona lasa izay, vao nanomboka ny andiany 2 tamin'ny Jolay 2009. Raha ny tokony ho izy, tadidiko fa nanantanteraka izany aho tamin'ny andro nisian'ny krizy demokratika tao Honduras Notereny hiasa amin'ny tranonay izahay, ary saika ...
gvSIG Batoví, ny fizarana voalohany ny gvSIG ho an'ny Fanabeazana dia aseho
Mahaliana ny fampiharana ny fanatontoloana sy ny herisetra tohanan'ny gvSIG Foundation. Tsy dia misy traikefa mitovy amin'izany, mbola tsy matotra tahaka ny ankehitriny ny rindrambaiko maimaimpoana, ary mahaliana ny seho amin'ny kaontinanta iray manontolo mizara fiteny ofisialy. Ny fanatrarana ny sehatry ny asa dia efa niantomboka, nahatratra ny ambaratonga akademika ...
Avy amin'ny i3Geo sy 57 ny lozisialy rindrambaiko Breziliana
Androany dia tonga ny vaovao momba ny fampidirana ireo ezaka eo amin'ny i3Geo sy ny gvSIG, lohahevitra iray izay toa fanapahan-kevitra lehibe ho ahy navoakan'ny Foundation gvSIG, na dia fantatro aza fa tsy ny vokatra hita maso amin'ny asa rehetra izay maharitra volana maro eo amin'ny tetikady iraisampirenena. Ny tranonkala hafa dia hiresaka momba izany ary hahafantatra betsaka ...
Ny sandan'ny paikadim-baovao momba ny faritany
Ao anatin'ny sehatry ny fampisehoana ny Sarintany jeolojika an'ny nosy Canary, hatao ny Fihaonambe ara-teknika momba ny sanda stratejika momba ny mombamomba ny faritany. Ny axis fototra amin'izany dia hifantoka amin'ny fampahalalana ara-jeografika, izay ho fampahalalana marim-pototra sy mirindra momba ny tontolo ara-batana terestrialy sy ny fivoarany ao ...
Aiza ny mpampiasa gvSIG
Amin'izao andro izao dia atolotra webinar ao amin'ny gvSIG hianaranao bebe kokoa momba ilay tetikasa. Na dia tanjona matanjaka amin'izany aza ny tsena miteny portogey satria vita ao anatin'ny rafitry ny hetsika MundoGEO, dia handroso bebe kokoa ny sakany, noho izany dia manararaotra mamakafaka ny isa sasany izahay ...
GvSIG, Internet sy Blogs
Fanontana faharoa an'ny GIS Course sy data geographic
Noho ny fangatahana voaray avy amin'ireo mpiara-miasa sy mpianatra dia nanomana fanontana faharoa ny fandaharam-pifanatrehana ny GIS sy ny Geographic Databases ny Geographica. Izany dia ahitana ora 40 mifanatrika-mifanatrika XNUMX, izay ahafantarana ny maha-zava-dehibe ny fahaizan'ny BDG, ilaina amin'ny izay matihanina rehetra izay te hiara-miasa amin'ireo singa izay ...
10 40 + famelabelarana ny fihaonambe Sig Libre 2012
Ireo lohahevitra maherin'ny 40 azo atao izay hotanterahina amin'ny Fihaonambe SIG Free fahenina ao Girona dia nambara. Angamba iray amin'ireo hetsika ao anatin'ny tontolon'ny Hispanika misy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny fahitana ny OpenSource mifantoka amin'ny Geographic Information Systems. Ohatra, avelako anao ny hira 10 izay manana ...
Geographica manomboka ny taona vaovao taranja GIS
Volana roa lasa izay dia niresaka taminao aho momba ny Geographica's GIS Pills, manara-maso ny zavatra ataon'ity orinasa ity. Androany dia tiako ny milaza aminao momba ny zavatra manakaiky ny taona 2012 raha ny momba ny tolotra fiofanana ao amin'ny faritra ara-jeografia. 1. Mazava ho azy momba ny vahaolana ArcGIS, gvSIG, QGIS ary ireo vahaolana hafa momba ny Geomatika Ity ...
Fampianarana CAD / GIS, GvSIG, qgis
Open Planet, pejy 77 hanova ny sainao
Taona iray tena nihetsiketsika tao amin'ny kaonferansa gvSIG, tany Italia, Royaume-Uni, France -amin'ny rafitry ny firenena miteny frantsay-, Uruguay, Arzantina ary Brezila - Amerika Latina- ary tahaka ny fomban-drazana, ny fanontana ny Open Planet izay miaraka amin'ireo kaonferansa gvSIG iraisam-pirenena farany teo. Saingy tsy…
gvSIG OS gazety
Drafitra fitantanana maika (GEMAS) mifidy gvSIG
Nampandrenesina izahay momba ity fampiharana fampiharana gvSIG ity ho an'ireo dingana miompana amin'ny fitantanana vonjy maika, ka noho izany dia naparitakay tamin'ny finoana fa mety hahasoa ny maro izy io. Ny faritanin'i Mendoza ao amin'ny Repoblika Arzantina dia faritany mora tohina noho ny toe-tany misy azy ary tratran'ny tranga voajanahary samihafa: ...
Misy amin'ny fiteny Geoprocessing gvSIG GGL
gvSIG dia namoaka fa vokatry ny Google Summer of Code ao amin'ny tetikasa gvSIG dia navotsotra ny plugin gvSIG ho an'ny GGL. Ny GGL dia fiteny fandaharana manokana ho an'ny geoprocessing izay ahitanao ny fananganana mahazatra an'ireo fiteny fandaharana malaza indrindra (tadivavarana, fepetra, sns.) Sy ...